MuGerman, kune chinyorwa pamberi pemazita ejenasi. Mazita emadzinza echiGerman ane vakomana nevasikana uye aya madzimai anouya mumhando nhatu. MuGerman, mazita ari echirume, echikadzi kana asina kwazvakarerekera. Naizvozvo, chinyorwa pamberi pezita chinoshanduka zvichienderana nehunhu hwezita.
MuGerman der das die Rimwe remazwi rinowanikwa. Aya mazwi haana zvakafanana neTurkey uye haakwanise kududzirwa zvizere mumutauro wedu. Aya mazwi akafanana nechikamu chezita ravari. Ndichiri kudzidza zita, zvinonyanya kukosha kuti udzidze chinyorwa charo pamwechete sekunge riri izwi rimwe chete rine zita.
Chinyorwa chemazita echikadzi echikadzi muchiGerman ndiDER.
Chinyorwa chemazita echikadzi echikadzi muchiGerman chinyorwa cheDIE.
Kwakarerekera mazita ejen muchiGerman zvinyorwa zveDAS
Kune zvimwe zvisaririra kumitemo yakataurwa muzvinhu zvitatu pamusoro. Zvisinei, aya mazwi mashoma.
Izwi rechinyorwa rinodaidzwa kuti "the" mune mamwe manyuko uye se "tsananguro yekufananidzira" mune vamwe. Pamusoro pezvo, zvinyorwa zvakapfupikiswa mumaduramazwi mazhinji uye masosi sezvakaratidzwa pazasi.
Izvo zvigadzirwa zvinoratidzwa mune zvinyorwa zvakawanda zvinotevera:
ari artikel m kana r inoratidzwa uchishandisa
ari artikel f kana e inoratidzwa uchishandisa
ari artikel n kana s inoratidzwa uchishandisa
Izwi rokuti m m r kana mifananidzo r ik ichava "der art,
Izwi f f e kana e e "richava" kufa ,,
Izwi n kana s ndiro izwi rokuti "das art.
Kana izwi riine chinyorwa, diki r rinoiswa padhuze neshoko, kufa kunoiswa padyo neshoko, uye tsamba e inoiswa padhuze neshoko, uye tsamba s inoiswa. Aya mavara ndiwo mavara ekupedzisira ezvinyorwa zve der-die-das. Semuenzaniso, kana iwe ukaona tsamba r padivi pezwi kana iwe ukatarisa muduramazwi, zvinoreva kuti chinyorwa chauri kutarisa chiri mu der, nenzira imwecheteyo, kana paine e padyo neshoko, zvinoreva kuti izwi iri kufa nechinyorwa, uye kana paine s, chinyorwa chinonzi das.
Kune marudzi maviri ezvinyorwa muGermany. MuchiGermany der, kufa uye das artikels inonzi yakananga artikel.
Kune zvekare zvisingazivikanwe zvinyorwa, ein uye eine. Iko kune hurukuro yeaya maviri marudzi ezvinyorwa pane yedu saiti, ona zvinongedzo pazasi.
Dzakananga zvinyorwa hurukuro
Indeterminate zvinyorwa hurukuro
Mamwe maduramazwi MFN Mavara mfn ndiwo mavambo emazwi anoti Maskulinum, Femininum, Neutrum (Vanhurume murume -Murume mukadzi-Asina kwazvakarerekera genus). Tsamba M inomirira der chinyorwa, F tsamba yechinyorwa chekufa uye N tsamba yechinyorwa chemashoko